कोभिड-१९ नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम गर्ने पाँच महिलामा नेपालकी डा.रुना झा पनि – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/कोभिड-१९ नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम गर्ने पाँच महिलामा नेपालकी डा.रुना झा पनि
कोभिड-१९ नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम गर्ने पाँच महिलामा नेपालकी डा.रुना झा पनि
काठमाडौं : को;रोना भाइरस ( को’भिड १९) को उपचारमा सक्रिय रुपमा अग्रपंत्तिमा देखिएका पाँच महिलाको सूचीमा केन्द्रीय प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.रुना झा पनि छनोटमा पर्न सफल भएकी छन्। युएन ओमनले को;रोना भाइरसको अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका विश्वका पाँच महिलाको सूचीअन्तर्गत जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झालाई समावेश गरेको हो।
संकटका बेला डा.झाले देखाएको कार्यकुशलता र सक्रियताको आधारमा डा. झालाई शीर्ष पाँच महिलाको सूचीमा राखिएको बताइएको छ। ‘प्रयोगशालामा अबेरसम्म बस्नु सामान्य जस्तो भएको छ। प्राविधिक कामको साथै अतिरिक्त, यातायात र खानाको प्रबन्ध गर्ने जस्ता काम पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। चिकित्सकको टीमको ख्याल राख्नु झाको लागि उच्च प्राथमिकता हो।
चीनको वुहानबाट ल्याइएको १ सय ७५ विद्यार्थीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । पहिलो पटक क्वारेन्टाइनमा प्रवेश गर्न उनको समूह थियो । उनीसँगै काजिकस्तान, चीन, जोर्डन, क्यारावियन अन्य महिला पनि समावेश भएका छन् । महामारी बढेसँगै उनीहरुको कामको चाप बढेको छ । तर उनी आफ्नो तर्फबाट कर्मचारीहरुलाई सहयोग गर्ने र मनोबल बढाउन सक्दो प्रयास गरिरहेकी छिन् । उनी आफूले कर्मचारीलाई सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको बताउँछिन् ।
मनसुन सक्रिय भएको पहिलो १५ दिन १८ जनाको दुःखद् नि’धन
भोटेकोशीमा बेपत्ताको खोजी गरिरहेको डुंगा पल्टियो